Iziphumo ze-Q3 2017: I-Apple iyaqhubeka nokukhula kunye ne-iPad iyamangalisa | IPhone iindaba
Iziphumo ze-Q3 2017: I-Apple iyaqhubeka nokukhula kunye ne-iPad eyothusayo
U-Apple usandula ukupapasha idatha yezemali yekota yesithathu yezemali (ngo-Epreli ukuya kuJuni) walo nyaka ka-2017, ixesha elithe cwaka ngokuthe gabalala apho kungekho ziphehlelelo ziphambili kwaye apho into eqhelekileyo kukulinda ihlobo ukufikelela esiphelweni salo Imveliso yeflegi iyabhengezwa. Nangona kunjalo, iindaba ezimnandi kwinkampani kukuba ukukhula kubuyile kananjalo kuwo onke amacandelo.
I-iPhones ezizigidi ezingama-41 zithengisiwe, i-11,4 yezigidi ze-iPads kunye ne-4.3 yezigidi ze-Macs ngengeniso epheleleyo ye-45.400 yezigidigidi, i-7% ngaphezulu kunakwelo xesha linye lonyaka ophelileyo. Yikota yesithathu ngokulandelelana ngokukhula kwaye kukwakho neenkcukacha ezinomdla njengokuthi kwicandelo leeNkonzo bakwazile ukophula irekhodi. kuyo nayiphi na ikota yonyaka.
Ukuthengiswa kwe-iphone kubethe ixesha elifanayo kunyaka ophelileyo kwakhona ngeeyunithi ezingama-41 ezigidi zithengisiwe. I-iPhone 7, ngaphandle kokugcina uyilo olufanayo kunyaka wesithathu ngokulandelelana, ihlala yomelele xa sele sithetha ngendlalifa yayo, kwaye isabalwa i-55% yengeniso iyonke yenkampani, inani eliphezulu kakhulu kodwa eliye lehla xa kuthelekiswa nekota zangaphambili.
Kodwa isimangaliso esikhulu ekungekho mntu ulindeleyo sivela kwisandla se-iPad. Ukuphehlelelwa kwe-iPad 2017, imodeli enexabiso elihlengahlengisiweyo lemali, isebenze ukwenza ukuthengiswa kwethebhulethi yeApple ibuyele kwikota ehlala ihlala inganiki olu lonwabo. Ukuthengiswa kwe-IPad kufikelele kwiiyunithi ezizizigidi ezili-11,4, ezimele ukukhula nge-15% xa kuthelekiswa kwangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Asinakulibala nokuba zii-Macs ezithe zonyuka kancinci ngeeyunithi ezizizigidi ezi-4,3, ezikule meko ikhoyo ngoku.
Ngaphakathi kweeNkonzo, iApple ikwazile ukunyuka yaya kwi-7,2 yezigidi zeedola kwingeniso, ukukhula kwe-22% kunyaka ophelileyo, kunye nenani elibetha irekhodi kuyo nayiphi na ikota yamaxabiso. Eli candelo libandakanya ingeniso evela kwi-iCloud, i-Apple Pay, ukuthengiswa kwe-iTunes, i-AppleCare, njl.. Kwaye ukuba ujonga ulwabiwo ngokwendawo, iApple ikhula ibililizwe lonke ngaphandle kwe China, apho iwela khona nge-10%. Imakethi yenkampani yaseAsia ihamba okona mzuzu wayo mhle emva kokukhula okumangalisayo kwaye ikwindawo yokuwa simahla kwiikota ezintandathu ezilandelelanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Iziphumo ze-Q3 2017: I-Apple iyaqhubeka nokukhula kunye ne-iPad eyothusayo
Ndonwabe kakhulu ngala manani nokuba awathethi ukuba iphone / ipad elandelayo ayizukubiza: /
Indalo ibalulekile kuApple, yiyo loo nto inamahlathi azinzileyo okupakisha iimveliso zayo
Eyona midlalo ilungileyo kwiVenkile ye App